ကျနော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်….အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မအလကိုတိုက်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူညီကိုအရမ်း မျှော်လင့်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်။အတွင်းကျကျလေ့လာမိတဲ့အခါ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်လာမှု ကိစ္စဟာ..
အရမ်းရှုတ်ထွေးပြီး ထင်သလောက်မလွယ်ကူကြောင်း သိရှိသွားကြပြီလဲဖြစ်ပါတယ်…အရမ်းကြီးမမျှော်လင့်တော့သလိုညဏ်မမှီဘူးထင်မိတဲ့အတွက်. ..သိပ်ပြီးတော့မရှေင်းပြချင်တော့ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိလာနိုင်တာက…နိုင်ငံတကာဘက်က အကူညီရရေးဟာအရေးမပါဘူးလားဆိုတယ့် မေးခွန်းမျိုးပါ။ဒီအရေးဟာ တောင်ပံ၂ဖက်ရှိပါတယ်။
ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပ ဆိုပြီး။တောင်ပံတစ်စုံညီနေရင်တော့ လိုရာခရီးကို အမြန်ဆုံးသွားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရချင်မိပါတယ်။သို့သော်….ထိုင်စောင့်နေလို့တော့ မရပါဘူး။
UN…? G7..? R2Pလား..ဆိုတော့….အဓိက,က တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့…တော်လှန်ရေးအရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ရေးဖြစ်လို့…ဆွဲခေါ်နိုင်သလောက်ဆွဲခေါ်ရင်း…စိတ်ဓာတ်တွေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်..ယနေ့ ကျနော်ကျမတို့ဒီနေရာဒီအဆင့်ထိ ရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။
တခုသတိထားရမှာက ယခုအချိန်မှာ….စိတ်ဓာတ်ရှိနေရုံနဲ့မပြီးတော့ဘူး…လုပ်ရပ်(တကယ်လုပ်ဖို့) လိုလာပါပြီ။ကျနော်ကျမတို့အားလုံး အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းစစ်အုပ်စုကို မလိုလားကြောင်း …
မရ ရအောင် တော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးလူတိုင်းမှာရှိနေကြောင်း တစ်ဖက်ရန်သူကိုပြသခဲ့ပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လုပ်ဖို့ပဲ ကျန်တော့တာပါ။နိုင်ငံတကာဘက်က ဝင်မလာနိုင်ဘူးလားမေးရင်…ဝင်လာနိုင်ပါတယ်…
ထင်သလောက်တော့ လွယ်ကူမလျှင်မြန်နိုင်ပါဘူး။အကုန်အကျ အဆုံးအရှုံးပိုများနိုင်ပြီး…ယခုအခြေနေအရဆို….ကျနော်ကျမတို့လှုပ်အားအပေါ်မှာမူတည်ပြီး..ကူညီမှုတွေရနိုင်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ပြည်ပတပ်တွေဝင်ဖို့က ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိပါသေးတယ်။ ဝင်လာလို့ရတဲ့အခြေနေ ၄ချက်ရှိတဲ့အနက်…ယခုပုံစံအတိုင်းဆိုလျှင် အခြေနေ ၂ ခုတော့ရှိပါတယ်။၁။ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ခြင်း နဲ့…၂။ငြိမ်းချမ်းရေး ထိမ်းသိမ်းခြင်း။ဆိုတော့….
သိထားသင့်တာက…ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်…UN စစ်သားတဦးအတွက် တနှစ်ကုန်ကျစရိတ်က အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂သိန်းခွဲအထိ ရှိတယ်။(ယခုငွေဈေးနဲ့ဆို စဉ်းစားသာကြည့်လိုက်ပေါ့)
ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ…ကျနော်ကျမတို့အားလုံးက တက်ညီလက်ညီနဲ့တော်လှန်ကြလို့ ပွဲကောင်းလာရင်..နံပါတ်၂ဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးထိမ်းသိမ်းရေး ဆိုပြီး..ဝင်ကူလာမယ်ဆိုရင်တော့….
UN စစ်သားတယောက်အတွက် ကုန်ကျငွေကUsဒေါ်လာ၄၅၀၀၀ သာရှိတဲ့အတွက်..ငြိမ်းချမ်းရေးထိမ်းသိမ်းရေးအစီစဉ်နဲ့ဝင်ဖို့ပဲ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ထင်မိတယ်။
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခ အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီး….ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ခြင်း (peace making)ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းခြင်း (peace keeping)ဘယ်လိုအစီအစဉ်နဲ့ပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့…
NUG ၏ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကသာ ပိုပြီးသိမယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်.UN,R2P စတဲ့အဖွဲ့တွေဘက်က….ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းခြင်း /တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ ပဋိပက္ခကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်….
ဘယ်ချိန် ရောက်လာ ရောက်လာ…ဘယ်တော့လာမယ်ပြောပြော…ယခုအချိန်မှာတော့….ကျနော်တို့အားလုံးသိရမှာက ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးပြီး…
လှုပ်နိုင်သလောက်လှုပ်၊တိုက်နိုင်သလောက်တိုက်၊ထောက်နိုင်တဲ့ဘက်က ထောက်ပံ့ပေးပြီး….ကူနိုင်သလောက်ကူပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း….ဒီတိုက်ပွဲက ထင်သလောက်မလွယ်ကူပေမဲ့…
ကျနော်ကျမတို့နိုင်မှာကတော့ သေခြာနေပြီ ဖြစ်တာမို့စစ်ပွဲကိုနိုင်ချင်ရင်….အဝေးကြီးမျှော်မကြည့်နဲ့…မင်းလိုချင်ရင် မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်
မင်းအနားမှာ မင်းသွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်ရှိတယ် လို့..သတိပေးရင်း….လာပါ ကျနော်ကျမတို့အတူတူသွားရအောင်။